Kulan looga hadlayay horumarinta Afka Hooyo oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulan looga hodlayay horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo Afka Hooyo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ka qeyb galeen qoraayaal Soomaaliyeed, iyadoo ay soo qaban qaabisay Ururka horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee IFIYE.
Kulanka oo diiradda lagu saaray sida lagu horumarin karo Afka Hooyo ayaa ka qeyb galayaashu waxa ay ka doodeen suurta galnimada sida sare loogu qaadi karo Afka Hooyo, iyagoo soo jeediyay tallooyin ku aadan sida lagu horumarin karo.
Guddoomiyaha Ururka horumarinta hidaha iyo dhaqanka IFIYE Fartuun Cumar ayaa tilmaamtay in ururkooda uu gacan ka geysanayo sida lagu horumarin karo Afka Hooyo.
“IFIYE waxa uu u taaganyahay horumarinta Afka Hooyo, anagoo fiirineyno baahida ay qabaan dadka barakacaayasha ah, runtii meelo badan oo xeryaha barakacayaasha ayaan ka hirgelinay in la baro Afka Hooyo” ayay tiri Fartuun.
Qoraa Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa ka sheekeeyay habka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo Afka Hooyo, waxaana qofka qoraya buug looga fadhiyaa in uu wax badan akhriyo, isla markaana uu noqdo qof meelkasta ka dhisan.
“Mowduuca aad dooneyso in aad wax ka qorto ayaad ka akhrineysaa, waxaana sameyneysaa qoraal horudhac ah oo ku qoran qalin qori, si aad u bisleyso waxa aad qortay adiga oo la kaashanaya qof aqoon u leh mowduuca aad diyaarineysid” ayuu yiri Qoraa Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax.
Cabdulaahi Maxamed Sheegow oo qoray buuga u hiili Afkaaga Hooyo ayaa tilmaamay in bulshada looga fadhiyo sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen horumarinta Afka Hooyo, waxaana
Guddoomiyaha Naadiga Hal abuurka iyo qalinleyda Soomaaliyeed ee PEN Cabdinaasir Yuusuf Macalin ayaa suxufiyiinta kula dar daarmay inay gacan ka geystaan horumarinta Afka Hooyo, isla markaana ay iska ilaaliyaan habka qoraalka oo ay ka taxadaraan xarfaha labo laamba.